Filoham-pirenena tao amin’ny Palais des Sport Mahamasina : “ Manana andraikitra hanavotra aina isika….” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloham-pirenena tao amin’ny Palais des Sport Mahamasina : “ Manana andraikitra hanavotra aina isika….”
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly, teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanantajahantena, omaly, ny herinandro Afrikanina ho an’ny fanaovana vaksiny sy ny Herinandron’ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza (14 hatramin’ny 18 mey). Madagasikara izay heni-kaja, heni-boninahitra mampiantrano ny lanonana, izay teo ambanin’ny fiahian’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina mivady. Ny vadin’ny Filoha Rajaonarimampianina Voahangy moa no reny mpiahy ny Reny sy ny Zaza.Vahoaka maro no nanome voninahitra ny fanokafana ny lanonana, ka tamin’izany no nilazan’ny Filoham-pirenena nanasa ny tokantrano rehetra manerana ny Nosy hanokatra ny varavarany ho an’ireo mpanao vaksiny mba ahafahan’ireo zaza malagasy rehetra ho vita vaksiny satria, “manana andraikitra hanavotra ny aina isika, indrindra ny ain’ny zanatsika.”, hoy ny Filoha. Nampirisika ireo ray aman-dreny amin’ny fanaovana vaksiny koa ny tenany, sy nampirisika ireo mpanentana ara-pahasalamana hatrany satria asa lehibe ny asan’izy ireo, ary niarahaba ny ezaka vitan’izy ireo ny Filoha. Noho ny ezaka nataon’ireo mpanentana ara-pahasalamana dia fantatra fa 85 hatramin’ny 90 isan-jaton’ny zaza malagasy no vita vaksiny. Ao anatin’ny fampirisihana azy ireo amin’ny asany hatrany moa dia nanolotra fitaovana entina miasa ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny Filoha mivady, toa ny moto 124 isa ho an’ny mpanentana ara-pahasalamana, 112 vata fampangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro, 20 vata fampangatsiahana mandeha amin’ny herinaratra, eo koa ny fitondrana vaksiny miisa 2 571, ary fitazomana hatsiaka (glacière) miisa 236 ho an’ireo CSB mba hitahirizana ny vaksiny, izay fiaraha-miasa amin’ny OMS, Unicef, Usaid sy ny maro hafa. Ankoatra izay moa dia tsy nohadinoin’ny Filoha Rajaonarimampianina mivady ihany koa ireo vahoaka maro be tonga teny an-toerana, ka notolorana vary sy voamaina ary menaka.
Mbola hitohy ny asa
Nofaritan’ny Filoha nandritra ny lahateniny moa ny asa vitany teo amin’ny sehatra ny fahasalamana sy ny fanabeazana, izay nentina nanarenana ny fahapotehana vokatry ny krizy politika. “Miisa 250 ireo Csb nikatona nosokafan’ny Fanjakana, ary tsy vitan’ny nosokafana fotsiny ihany fa nasiana mpitsabo sy nasiana fanafody. Natsangana ihany koa ny toeram-pandidiana amin’ny faritra maro manerana ny Nosy, izay manodidina ny 20 eo ho eo. Ireo niteraka no tena afa-pahasahiranana, ary betsaka ny fahafatesana teo ampiterahana no avotra noho ireny toerana ireny”, hoy ny Filoha. Tsy mitsahatra ny asa, ary mbola hiasa hatrany ho an’ny fahasalamana, ho an’ny reny, ho an’ny fahasalaman’ny vehivavy, ho an’ny fahasalamana zaza, araka ny fanamafisany hatrany. Notsipihan’ny Filoha koa ny ezaka vitany teo amin’ny lafin’ny fanabeazana, ka nampidirany indray tany an-tsekoly ireo ankizy iray Tapitrisa niala ny sekoly ny taona 2009. “Raha mitodika amin’ny ankizy, fahasalamana no resahina fa tsy ny fahasalamana ihany no mahakasika ny ankizy fa ny fampianarana indrindra indrindra. Iray Tapitrisa ny ankizy niala sy tsy tafiditra tany an-tsekoly noho ny krizy ara-politika. 3 taona aty aoriana vao tafaverina daholo. Zana-bahoaka foana no sahirana rehefa misy zavatra ohatra ireny. Zana-bahoaka no tsy maintsy tsinjovintsika satria ireny no maro an’isa”, hoy ihany ny Filoha Rajaonarimampianina. Marihina fa an’hetsiny no vatsiana sakafo isan’andro manerana ny Nosy. Eo koa vatsin’Ankohonana entina hanampiana ireo reny sahirana, ny ankizy any amin’ireo faritra sahirana rehetra manerana an’i Madagasikara. Tsy azo hadinoina koa ny fampidirana mpampianatra maro sy nofanina hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana. Ny tena zava-dehibe dia ny fanomezana “kits scolaires” ny ankizy, efitrano sekoly vaovao izay namboarina na nohavaozina.